ब्राइडल मैनीक्योर २०२२ मा ट्रेन्ड | बेजिया
सुसाना Godoy | 12/05/2022 16:00 | बोडस
La दुलही मैनीक्योर प्रवृत्ति 2022 पनि बोलेका छन् । यद्यपि यो सत्य हो कि प्रत्येक दुलहीले आफूलाई सबैभन्दा सहज महसुस गर्ने सबै कुरा लगाउनु पर्छ, हामी अरू भन्दा माथि खडा हुने केही विचारहरूको बारेमा कुरा गर्नबाट बच्न सक्दैनौं। त्यसोभए, यदि तपाइँको विवाहको दिन नजिक छ भने, तपाइँ सधैं तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाइँ आफैलाई तपाइँको शैली परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ।
यो वर्ष हामीले हप्ताको हरेक दिन देख्ने केही रंगहरू फेसनमा फर्किएका छन् जस्तो देखिन्छ। तर के हो कि दुलहीहरूमा, आधारभूत विचारहरू तोड्नु पनि उत्तम विकल्प हो। यद्यपि हामी भन्छौं, तपाईले सधैं आफ्नो मनपर्नेमा जानु पर्छ। किनभने यो पूर्णतया रमाइलो गर्ने दिन हो। दुलहीहरूको लागि सबै मैनीक्योर प्रचलनहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
1 ब्राइडल मैनीक्योर २०२२ मा ट्रेन्ड: बरगंडी रंग
2 जुनून रातो मैनीक्योर
3 एक अतिरिक्त चमक संग नङ
4 स्टिकरसहितको मैनीक्योर पनि ब्राइडल मैनीक्योर २०२२ मा चलन हो
ब्राइडल मैनीक्योर २०२२ मा ट्रेन्ड: बरगंडी रंग
हामी किन बरगंडी जस्तो रङ यति धेरै मनपर्छौं? ठिक छ, किनभने यो बाहिर खडा छ, यो आधारभूत भन्दा बढि हुन्छ र हामीलाई धेरै मनपर्ने लालित्य थप्छ। त्यसोभए यो सबैको लागि, जुन सानो छैन, यसले मैनीक्योरहरू छनौट गर्दा आधारभूत रंगहरू मध्ये एकको रूपमा राखेको छ। तर निस्सन्देह, अब हामी दुलहीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं, जसले प्रायः भागको लागि सधैं हल्का रंगहरू चिन्ह लगाउँछन्। यो उल्लेख गर्नुपर्छ कि तिनीहरू मध्ये प्रत्येक एक यस्तो विचार संग फेसनबल हुन सक्छ, तर यदि तपाईं रंग को छर्रा वा हुनसक्छ एक जुत्ता पनि 'फरक' भएको लुगा लगाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि एक विचार मा शर्त लगाउनुहोस्। बोर्डो। त्यसैगरी यदि तपाईंको विवाह पतनमा छ भने। तपाईं निश्चित रूपमा सफल हुनुहुनेछ!
जुनून रातो मैनीक्योर
यो रातो रङको बारेमा सोच्दै छ र पक्कै पनि यसलाई दुलहीहरूमा सामेल गर्दैछ। किनभने यस अवस्थामा, सबैभन्दा पुरानो फिनिशहरू उपस्थित हुन सक्छन्, यद्यपि यो सधैं त्यो तरिका हुनु हुँदैन। रातो मैनीक्योर र पेडीक्योर एउटै छायामा ओठको लागि उत्तम पूरक हुन सक्छ।। तिनीहरूले हाम्रो लुकमा आनन्द र जोशको अन्त्य दिनेछन्। निस्सन्देह, जबसम्म आँखा मेकअप धेरै जीवन्त छैन। हाम्रो दुलही लुक सन्तुलन गर्न सक्षम हुन केहि भन्दा बढि। यो एक रमाइलो र रमाइलो रंग हो, विशेष गरी गर्मी समय को लागी। के तपाइँ यसलाई तपाइँको विवाहमा तपाइँ संग लैजानुहुन्छ?
एक अतिरिक्त चमक संग नङ
यदि हामीले ब्राइडल मैनीक्योर 2022 मा प्रवृतिलाई उल्लेख गर्छौं भने, हामी थप चमकको साथ समाप्तलाई बिर्सन सक्दैनौं। हो, तथाकथित पर्ल मैनीक्योरले पुनरागमन गर्दैछ। तपाईंले उनलाई चिन्नुहुन्छ होला मोती मैनीक्योर, तर यो सबैभन्दा मिल्दोजुल्दो छ, र यसमा तपाईंले हल्का वा पेस्टल रंगहरूको आनन्द लिनुहुनेछ, तर हामीले त्यो चमकको स्पर्शको साथ घोषणा गरेका छौं। त्यो अन्तिम कोटिंगले नङहरू धेरै सुन्दर देखिन्छ, त्यसैले यदि हामी हाम्रो विवाहको बारेमा कुरा गर्छौं भने, यो राम्रो छैन।
स्टिकरसहितको मैनीक्योर पनि ब्राइडल मैनीक्योर २०२२ मा चलन हो
जब तपाइँ समान भागहरूमा एक सुरुचिपूर्ण तर मौलिक स्पर्श थप्न चाहानुहुन्छ, यस्तो विचार आउँछ। यो एक उत्तम विकल्प भन्दा बढि हो किनभने हामी स्टिकर संग नङ को बारे मा कुरा गर्दैछौं। हो, ती साना विवरणहरू जुन हामीले अनन्त विषयवस्तुहरूसँग फेला पार्न सक्छौं। फूलहरूबाट, साना हीराहरूमा। तपाईले चाहानु भएको सबै कुरा सधैं उपस्थित हुनेछ। त्यसैले यस मामला मा, तिनीहरूलाई थप प्रमुखता थप्न, आधार छाया छनोट जस्तो केहि छैन, नङका लागि, नरम। तसर्थ, तपाईंले पेस्टल गुलाबी वा नग्न र सेतो जस्ता रंगहरू रोज्न सक्नुहुन्छ, जुन सधैं सफल हुन्छ। यसबाट सुरु गर्दै, केही स्टिकरहरूमा बाजी लगाउनु राम्रो हुन्छ जुन सरल पनि छन् र यदि ती छैनन् भने, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रत्येक हातको एक वा दुई नङहरूमा मात्र राख्नुहुनेछ। यस तरिकाले तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँको ठूलो दिनमा उत्कृष्ट शैलीको आनन्द लिनुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » बोडस » ब्राइडल मैनीक्योर २०२२ मा ट्रेन्ड
Crochet शीर्ष, गर्मी मा एक प्रवृत्ति